Na-ehi ụra n'ụbọchị osikapa maka ọnwụ
Ịlaghachi ụbọchị na osikapa - nhọrọ kachasị mma
Ọbụna ndị na-enweghị ibu arọ, ndị ọkachamara na-enye ndụmọdụ ka hazie ndozi nri kwa izu, nke na-enye aka ime ka ahụ toxins na toxins dị ọcha. A na - enye ezigbo utịp site na ụbọchị ị na-ebu ọnụ n'elu osikapa, e nwere ụdị nri dịgasị iche, n'etiti nke ọ dị mfe ịhọrọ nke kachasị mma.
Kedu esi esi osi osikapa maka ubochi onu?
Ụbọchị na-ebute osikapa na osikapa kacha mma na otu ụbọchị ahụ furu efu ruo 1 kilogram, na-enweghị ọchịchọ siri ike iri nri na ike ọgwụgwụ. Isi ihe bụ iri nri n'egbughị oge, na-eri nri na nri. Osikapa bu ezigbo mmadu, o na-eweputa nani ogwu ahu, ma o bu mmiri mmiri. Maka ihe oriri, mkpụrụ ọka nke kachasị ọcha dị mma: aja aja ma ọ bụ osikapa ọhịa. A na-ahapụ ya ka osi esi osikapa na agba ọcha, ma ọ bụghị ya. Ụbọchị na-ebu ọnụ na osikapa na-enweghị nnu ga-enwe ezi mmetụta ma ọ bụrụ na esi nri ya n'ụzọ ziri ezi. Enwere nhọrọ atọ ịhọrọ site na:
Ụbọchị anọ tupu nri, otu iko ọka ghaa mmiri oyi, na-eme ka ọ dị ọhụrụ kwa ụbọchị. Tupu isi nri, gbanye ya ka ọ ga-asa ma wụnye otu ụzọ abụọ. Obụpde ruo mgbe ọka dị nro, mgbe ahụ protrude ihe dị ka ọkara otu awa.
Were osikapa na mmiri esi mmiri, otu na abụọ, ka esi nri ruo minit iri. Gbanwee mmiri ma kpoo ruo mgbe njikere.
Sook croup maka abalị. Mgbe ahụ gbanwee mmiri ahụ, ma kpoo ruo mgbe ị ga-eji nwayọọ nwayọọ mee ihe.
Na-ebudata ụbọchị na osikapa maka ọnwụ
Riz na-ebudata ụbọchị, na para na nri ọ bụla, chọrọ nrube isi na iwu nri, ma ọ bụghị mmetụta ya nwere ike ịbụ nke ọzọ. Ihe ndị dị mkpa dị mfe:
A na-asacha riz mgbe niile.
A gaghị etinye nnu, sugar na ngwa nri.
Na-aṅụ ihe dị ka lita lita abụọ n'ụbọchị.
A na-ewe ihe oriri ahụ ọkụ ma ọ bụrụ na ọ dị ọkụ.
Ịṅụ ihe ọṅụṅụ tii, si osikapa nwere ike ịbụ afọ ntachi.
Nri ruo mgbe awa ole na ole tupu e dina ụra.
Zere nnukwu ịgba ume.
A na-eke osikapa a kụrụ osizi iche n'ime akụkụ dị iche iche.
Ọ bụrụ na a na-eme atụmatụ nri kwa ụbọchị, ọ ka mma ịhọrọ ụbọchị nke izu maka nke a.
Riz na-ebupụta ụbọchị site na Margarita Koroleva
Otu esi eji ụbọchị osi na osikapa na Margarita Koroleva, taa ha maara na ọ bụghị "kpakpando", ndụmọdụ ndị dọkịta sayensị nyere nyere ọtụtụ aka. Atụmatụ na uzommeputa dị nnọọ mfe, ihe bụ isi bụ ịrapara n'ahụ ha n'ụzọ doro anya:
Tupu ụbọchị nri gị na-eri ihe karịrị 250 grams osikapa n'abali na mmiri mmiri.
Saa ya n'ụtụtụ ruo mgbe mmiri gwụsịrị.
Gbakwunye iko mmiri abụọ, esi nri maka minit 15.
Kewaa n'ime akụkụ 6.
Na-eri nri abalị karịa 8 elekere.
Na-aṅụ otu ụbọchị na lita lita abụọ.
Ị nwere ike iri ugboro atọ na teaspoon mmanụ aṅụ, iche iche na osikapa.
Riz na-ebudata ụbọchị si Malysheva
Ihe iri nri na osikapa dị mma n'ihi na ihe ọkụkụ a nwere oke potassium na sodium. Sodium na-egbu oge n'ime ahụ, potassium na-ahapụ mmiri mmiri a. Ebe ọ bụ potassium na osikapa dị okpukpu ise karịa, enwere mmetụta dị mma. Ndị buru ibu na-edozi ahụ, n'ihi ya enweghi ọchịchọ siri ike iri ihe. Ndị ọkachamara nwere ahụmahụ na-enye ntụziaka ha, otu ụbọchị na-arụ ọrụ maka osikapa na Malysheva dị irè:
Obụpde otu osikapa osikapa na lita abụọ, abughi nnu.
Kewaa n'ime akụkụ 8.
Iri nri a: osikapa, mgbe otu awa - 250 grams nke mmiri, na osikapa ọzọ.
Na-ebubata ụbọchị na osikapa osikapa
Ọ dị nnọọ irè ibubata ụbọchị na osikapa osikapa, n'ihi na ngwaahịa a nwere ọtụtụ vitamin na eriri. A na-akpọkwa ya antioxidant siri ike, nke na-ebelata ihe ize ndụ nke kansa. Ọkụ na eriri afọ, zuru oke na-agụju agụụ. Ebe ọ bụ na osikapa osikapa adịghị egbuke egbuke, ọ dị mkpa ka a gafee ya iji wepụ ihe ndị ahụ, kpochapụ nke ọma. Ọ dị njikere n'ụzọ dị mfe:
Otu iko ọka wunye iko abụọ nke esi mmiri.
Mgbe ọ na-enwu, belata okpomọkụ, wepụ ụfụfụ ahụ.
Esi nri maka minit 30 ruo mgbe grains dị nro.
Ọ dịghị mkpa na nnu ya, a na - ahapụ obere mmanụ oliv .
Kewaa n'ime servings 6-7.
A na-adụ ndị na-edozi ahụ nri ka ha họrọ maka mgbake ụbọchị ezumike na osikapa agba aja aja, nke a na-akpọkwa aja aja. Nkwadebe adịghị ezuru, karịa iche na nsụgharị ndị gara aga:
Tupu isi nri, wụsa groats maka awa 2.
Richaa ọtụtụ ugboro.
Na ogbe osikapa a bu iko abuo nke esi na mmiri esi esi ya, ruo mgbe osisi ga-adi.
A na-ahapụ ya itinye otu tablespoon nke mkpụrụ osisi sesame na-emepụta ihe ma ọ bụ curry, ma na-enweghị nnu.
Kewaa n'ime 6 servings, na-aṅụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ tii ma ọ bụ na-abụghị carbonated mmiri.
Na-ehi ụtụtụ n'ụbọchị osikapa na apụl
Ndị na-enweghị mmasị na osikapa ma ọ bụ enweghị ike ime n'enweghị nnu kpamkpam, na-enye ha nkwụsị dị nro na osikapa. Otu n'ime ha bụ osikapa na apụl. A na-ekewa ihe dị na iko nke ọka sie n'ime ụzọ atọ, n'etiti iri na ha na-aṅụ ihe ọṅụṅụ apụl ma ọ bụ na-eri apụl ọhụrụ, ọ bụghị ihe karịrị ụzọ atọ n'ụbọchị. Mmiri mmiri na-enweghị njedebe. Maka ndị na-agbalị oge mbụ maka ụbọchị ezumike, a na-emepe nhọrọ nhọrọ nro dị nwayọọ:
N'ụtụtụ, rie nri abụọ na-acha osikapa. Jiri ọka a kwadebere, ị nwere ike fesaa ya na pawuda.
N'ehihie - a salad osikapa na mkpụrụ.
Na mgbede, ngwakọta "osikapa na ọcha puree si apụl." Ịnwere ike ịgbakwunye pinch nke ginger.
Na-ehi ụtụtụ n'ụbọchị osikapa na mmiri
A na-ewere egbugbere osikapa osikapa kachasị mma na-eme ka mmiri dị na mmiri. E kwesiri ka esi nri ya na onye na - esi nri, mmiri - naanị ịnweta ma ọ bụ dị ọcha, na - aṅụ ihe dị ka minit 15 tupu nri ma mgbe 30 - gasịrị. Ihe ndị a na-eme kwa ụbọchị yiri nke a:
N'ututu, rie nri osikapa na elu.
N'ehihie, e gwakọta eyịm na galik garlic, a na-agbakwunye ose 2 nke osikapa.
Na mgbede - osikapa, eji ya ginger na ose oji.
Na-ehi ụtụtụ n'ụbọchị osikapa na akwụkwọ nri
Ọ dị mfe ịnyefe nri osikapa na iji akwụkwọ nri, ọtụtụ na-ahọrọ nri dị otú ahụ na-eri nri. Kedu otu esi eme osikapu na akwukwo nri? Nchọta:
Nri ụtụtụ: akpọọ nkụ osikapa na tomato, aubergines na elu. Efrata - 5 ruo 1, akpọọ nkụ maka nkeji 15.
N'ehihie - a salad nke cucumbers, avocado, arugula na osikapa.
Maka nri abalị, esi nri eghe, ọ bụghị ihe karịrị okpukpu abụọ. Ị na-eme osikapa, osikapa na elu, ị nwere ike ịgbakwunye galve garlic. Acha maka nkeji 15.
Na-ebubata ụbọchị na osikapa na cucumbers
Ọ bụghị ihe ọjọọ mere ụbọchị ezumike dị otú a, dịka nri na osikapa na cucumbers. Ebe ọ bụ na ihe oriri a dị 95% mmiri na 5% dị ọcha eriri, ị nwere ike ịṅụ obere mmiri mmiri. Atụmatụ ikike dị mfe:
Obụpde iko osikapa, kewaa n'ime 5-6 akụkụ.
A na-eji onye ọ bụla na-eje ozi otu kukumba, n'ụbọchị a na-enye ha ohere iji ihe ruru ọkara kilogram.
Na-aṅụ naanị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ tii ma ka ịnweta mmiri ịnweta mmiri.
Kedu ihe na-enye ụbọchị ezumike n'elu osikapa? Ihe mere eji ehicha ahụ dị otú a bụ ọtụtụ:
osikapa na-eme ka nsị na ụba mmiri na-ebugharị;
ihe oriri nke ọka a na-egbochi ọchịchọ iri nri;
na osikapa nwere protein na carbohydrates nke na-eme ka abụba abụba ;
kwa ụbọchị furu efu ruo otu kilogram;
na nri osikapa, na-agbanwe nri, ị nwere ike ịnọ ọdụ ruo ogologo oge, na-enweghị nsogbu ahụ ike.
Nri ndị Japan maka ụkọ ọnwụ
Nri nke kabeeji maka ọnwụ arọ maka ụbọchị 5
Beetroot na kefir - nri
Kedu ka ị ga-esi tụfuo n'ime ụbọchị 3?
Ego ole ka Iv Polna?
Abụba agaghị enwe ohere! 5 nri kacha mma
Nri na ulcerative colitis
Kedu ka Irina Pegova si tụfuo?
Na-ebudata ụbọchị maka ọnwụ arọ na yogọt
Anwansi anwansi - agbapụta maka ọnwụ
Gịnị kpatara nrọ nke ịbụ abụ na nrọ?
Edere akwụkwọ ahụ
Troxevasin na ime
Kedu ka esi esi mee ihe na tebụl n'ụlọ?
Ọnụ ụbụrụ ahụ na-adị site na ụbọchị nke okirikiri
Mkpụrụ osisi slicing
Ihe oriri potassium - ihe maka osisi, atụmatụ nke ngwa n'ubi
Ọrịa nke nwamba dị ize ndụ nye ụmụ mmadụ
Mfe eji edozi maka ụlọ akwụkwọ
Kedu ihe ị ga-eri ka Kate Middleton?
Ntinye nke ụlọ mgbochi
Okooko osisi sitere na ajị anụ na aka aka ha
Kedu otu esi eji ejiji n'oge mgbụsị akwụkwọ 2013?
Parmelia - eji na contraindications